Bit By Bit - Mass mmekota - 5.2.2 Otuowo-nzuzo nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị manifestos
Nzuzo na ndọrọ ndọrọ ọchịchị manifestos, ihe a na-eme site ọkachamara, ike ga-rụrụ site a mmadụ mgbakọ oru ngo na-akpata ukwuu reproducibility na ike mgbanwe.
Yiri Galaxy Zoo, e nwere ọtụtụ ọnọdụ ebe-elekọta mmadụ na-eme nnyocha chọrọ koodu, were, ma ọ bụ ịkpọ ihe oyiyi ma ọ bụ mpempe ederede. Otu ihe atụ nke ụdị nnyocha bụ nzuzo nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị manifestos. N'oge ntuli aka, ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ na-emepụta manifestos akọwa ha iwu ọnọdụ na-eduzikwa nkà ihe ọmụma. Dị ka ihe atụ, ebe a bụ otu n'ime ndị manifesto nke Labor Party na Great Britain si 2010:
"Ọtụtụ nde mmadụ na-arụ ọrụ na anyị ọrụ ọha na eze embody kasị mma ụkpụrụ nke Britain, na-enyere-ike ka ndị mmadụ na-eme ka ndụ ha mgbe echebe ha pụọ ​​n'aka ihe ize ndụ ha ga ghara ibu ya naanị ha. Dị nnọọ ka dị anyị mkpa ịdị bolder banyere ọrụ dịịrị onye nke ọchịchị na-eme ahịa na-arụ ọrụ pụtara, ọ dịkwa anyị mkpa ịdị obi ike mgbanwe nke ọchịchị. "
Ndị a manifestos nwere ihe bara uru data maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọkà mmụta sayensị, akpan akpan ndị na-amụ ntuli aka na Ọnọdụ nke iwu nrụrịta ụka. Iji n'usoro wepụ ọmụma ndị a manifestos, na-eme nnyocha kere The Manifesto Project , nke a haziri ahazi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọkà mmụta sayensị koodu 4,000 manifestos si fọrọ nke nta ka 1,000 ndị ọzọ nọ ná mba 50. Onye ọ bụla ikpe na onye ọ bụla manifesto e coded site otu ọkachamara na-eji a 56-Atiya atụmatụ. The N'ihi nke a collaborative mbọ bụ a oke dataset chịkọta ọmụma agbakwunyere na ndị a manifestos, na a dataset e ji mee ihe na ihe karịrị mmadụ 200 na nkà mmụta sayensị akwụkwọ.
Kenneth Benoit na ibe (2015) ekpebiwo m ịnara manifesto nzuzo ọrụ na mbụ e rụrụ site ọkachamara na mee ka ọ gaa mmadụ mgbakọ oru ngo. N'ihi ya, ha kere a nzuzo usoro na ihe ndị ọzọ reproducible na ọzọ mgbanwe, tinyekwara ọnụ ala karịa na ọsọsọ.
-Arụ ọrụ na 18 manifestos eme n'oge isii na-adịbeghị anya ntuli aka na UK, Benoit na ndị ọrụ ibe ji mee ihe gbawara n'etiti-etinye-ikpokọta atụmatụ na ọrụ site a Micro-ọrụ ọrụ ahịa (Amazon Mechanical Turk na CrowdFlower bụ ihe atụ nke Micro-ọrụ oru ahịa; n'ihi na ihe on Micro-ọrụ na ọrụ ahịa, gụọ Isi nke 4). The na-eme nnyocha were kwa manifesto na kewaa ya n'ime ahịrịokwu. Ọzọ, ụmụ mmadụ fim bụ maka mee ihe n'ebe ọ bụla ikpe. Karịsịa, ọ bụrụ na ikpe abuana a iwu kwuru, e coded tinyere abụọ akụkụ: aku (site nnọọ ekpe ka nnọọ nri) na-elekọta mmadụ (site na-emesapụ aka mgbanwe) (ọgụgụ 5.5). Onye ọ bụla ikpe e coded site banyere 5 dị iche iche ndị mmadụ. N'ikpeazụ, ndị a ratings e jikọtara eji a mgbakọ na mwepụ nlereanya na gua ma onye rater mmetụta na ike nke ikpe mmetụta. Na niile, Benoit na ndị ọrụ ibe anakọtara 200,000 ratings si banyere 1,500 ọrụ.
Ọgụgụ 5.5: nzuzo atụmatụ si Benoit et al. (2015) (Fig 1).
Iji na-amata na àgwà nke ìgwè mmadụ nzuzo, Benoit na ndị ọrụ ibe nwekwara banyere 10 ọkachamara na-ọkachamara na gụsịrị akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ na Political Science-ọnụego otu manifestos eji a usoro yiri. Ọ bụ ezie na ratings si na ndị òtù nke ìgwè mmadụ ndị ọzọ variable karịa ratings ndị ọkachamara, otutu mmadu kwenyere ìgwè mmadụ fim bụ maka ama ịrịba ama nkwekọrịta na otutu mmadu kwenyere ọkachamara fim (ọgụgụ 5.6). Ihe atụ a na-egosi na, dị ka na Galaxy Zoo, mmadụ mgbakọ oru ngo nwere ike na-akwa àgwà pụta.
Ọgụgụ 5.6: Expert atụmatụ (x-axis) na ìgwè mmadụ atụmatụ (y-axis) nọ ịrịba ama nkwekọrịta mgbe nzuzo 18 party manifestos si Great Britain (Benoit et al. 2015) . The manifestos nzobe si atọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ (Conservative, Labour,-emesapụ Democrats) na isii ntuli aka (1987, 1992, 1997, 2001, 2005, 2010).
Ewu na a N'ihi ya, Benoit na ndị ọrụ ibe ji mee ihe ha ìgwè mmadụ-nzuzo usoro ime nnyocha nke omume na Manifesto Project. Dị ka ihe atụ, ndị Manifesto Project mere koodu na manifestos on isiokwu nke mbata na ọpụpụ n'ihi na ọ bụghị a salient isiokwu mgbe nzuzo atụmatụ e mepụtara n'etiti afọ ndị 1980s. Na, n'ebe a, ọ bụ logistically infeasible maka Manifesto Project na-aga azụ na re-code ha manifestos weghara ozi a. Ya mere, o yiri ka na-eme nnyocha mmasị na-amụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mbata na ọpụpụ na-esi chioma. Otú ọ dị, Benoit na ndị ọrụ ibe bịara nwee ike iji ha bụ mmadụ mgbakọ usoro ime nke a nzuzo-ahaziri ka ha research ajụjụ ọsọ ọsọ na mfe.
Iji na-amụ mbata na ọpụpụ iwu, ha nzobe ndị manifestos asatọ ndị ọzọ na 2010 nhoputa ndi ochichi na Great Britain. Onye ọ bụla ikpe na onye ọ bụla manifesto e coded iji kpebie ma ọ metụtara mbata na ọpụpụ, ya bụrụ otú ahụ, ma ọ bụ pro-mbata na ọpụpụ, na-anọpụ iche, ma ọ bụ mgbochi mbata na ọpụpụ. N'ime 5 awa nke launching ha oru ngo, nke a rụpụtara na. Ha nwetara ihe karịrị 22,000 Ibọrọ na a ngụkọta eri nke $ 360. Ọzọkwa, atụmatụ e mere si n'ebe ìgwè mmadụ gosiri dị ịrịba ama nkwekọrịta na mbụ nnyocha e mere nke ọkachamara. Mgbe ahụ, dị ka a ule ikpeazụ, ọnwa abụọ gasịrị, ndị na-eme nnyocha mepụtagharị ha ìgwè mmadụ-nzuzo. N'ime awa ole na ole, ha kere ọhụrụ ìgwè mmadụ-coded dataset na anya ekwekọghị mbụ ha, ìgwè mmadụ-nzobe data set. Ndị ọzọ okwu, mmadụ mgbakọ nyeere ha aka n'ịwa nzuzo nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị odide nke kwetara na ọkachamara nwete na bụ reproducible. Ọzọkwa, n'ihi na mmadụ mgbakọ bụ ngwa na ọnụ ala, ọ dị mfe n'ihi na ha iji hazie ha data collection na ha kpọmkwem research ajụjụ banyere mbata na ọpụpụ.